Banyere Anyị - Yueqing Junwei Electric Co., Ltd.
Yueqing JUNWEI Electric Co., Ltd., dị na ọmarịcha ebe ntụrụndụ Yandang Mountain dị na Shanxi, osimiri East China Sea estuary, nke dị n'okporo ụzọ mba 104, naanị nkeji iri abụọ site na ọdụ ụgbọ elu Wenzhou site n'ụgbọ ala, oké osimiri na ikuku. njem bụ nnọọ adaba, a set nke nnyocha sayensị, mmepe, n'ichepụta, ahịa, bụ otu n'ime nkwonkwo-ngwaahịa ụlọ ọrụ.
A kọwapụtara ụlọ ọrụ a na mmepụta nke: relay thermal, contactor, breaker (ụdị plastik), onye na -ebido ebido, obere sekit sekit, onye na -echebe moto na ọtụtụ ngwaahịa. dị ka imepụta ọdịdị ngwaahịa, ụdị pụrụ iche, ahịrị dị larịị, mara mma na mmesapụ aka. Ijikọ akụkụ dị ka ọkọlọtọ nke imewe, ike ụwa niile, nwere ike dakọtara, arụmọrụ yana nhazi ma ọ bụ ka mma karịa ụkpụrụ ụlọ ọrụ dị mkpa, oke ngwaahịa, ịdị mma, arụmọrụ kwụsiri ike, ụfọdụ ngwaahịa nwere ike dochie ngwaahịa mbubata, ụlọ ọrụ ahụ nwere akụrụngwa dị elu, teknụzụ tozuru oke nwere akụrụngwa nchọpụta ụlọ dị elu maka imepụta ntụkwasị obi Ngwaahịa na -enye nkwa kacha mkpa.
Nọgide Na Na
Soro n'echiche nke ihe ọhụrụ, njikwa njikwa na ngwakọta teknụzụ ọhụrụ, na -akwalite mmepe na -adigide. Companylọ ọrụ egwuregwu ga -adị ka ọ dị n'oge gara aga n'okporo ụzọ nke ihe ọhụrụ na -aga ngalaba dị iche iche, ọnọdụ ọ bụla nke nkwalite na ihe ọhụrụ na -aga n'ihu, ka ịdị mma ngwaahịa ụlọ ọrụ, ọkwa njikwa, uru akụ na ụba na ịdị mma n'ozuzu ya bụ nkwalite na -amị mkpụrụ. Ekwesịrị imesi ya ike, njikwa kwesịrị ị attentiona ntị na arụmọrụ; iji melite arụmọrụ ọrụ, belata ọnụ ahịa mmepụta; ahịa na-elekwasị anya na mmepe nke ndị ahịa dị elu; teknụzụ ka ọ dị mma ma mee nyocha na mmepe nke ahịa ahịa ngwaahịa ọhụrụ chọrọ.
Companylọ ọrụ ahụ na-enweta ogo klaasị mbụ, ọrụ klaasị mbụ, aha ndị klas mbụ na ndị ahịa anyị ọnụ, na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta nnukwu ụkpụrụ.